Kungani kufanele angibhemi spice. Spice: ngemiphumela ukusetshenziswa. Okunqatshelwe ugwayi ingxube
Ngesizathu esithile, kuvela ukuthi omuhle omncane livele intsha yanamuhla yesipiliyoni ngezizukulwane. Kodwa zonke izinhlobo emisha eziyingozi zithobele intsha, efana iqabunga kusukela umshanelo in the okugeza. Ikakhulu, kokusho spice. Imiphumela ukusetshenziswa ingxube ebulalayo ezingalindelekile. Yingakho - kuyingozi kakhulu. "Ngaphansi spice" Awukwazi ukuzibamba, akunakwenzeka ukuvikela abathandekayo uchuku yabo. Spice kwenza abantu zingalawuleki, futhi kungcono akukuphela kwesizathu kungani Akufanele ubheme ke. Isimo jikelele izozama uhlole ngokuningiliziwe.
Intsha - iqembu okuyingozi, njengoba basengozini kakhulu ngokubona isixuku, besaba ayithethelele umbono womunye umuntu, futhi ayikwazi ukuhlukanisa phakathi izithakazelo zabo nezifiso zabanye. Uma inkampani utawuniketa ingane usikilidi, cishe uyavuma, uma kuphela ngoba besaba kokuba esekhishwa inyumbazane. Futhi uma ukunikela spice? Okokuqala ngibhema ugwayi nje isithakazelo. Lapho elithuma okwesibili kuyoba inkampani. Futhi okwesithathu - engena umkhuba. Kuyinto kungenangqondo lokucabanga spice kancane isinyathelo sakhe. Hlala "ku spice" kungenziwa akhiwa isenzo izidakamizwa kanzima, okwaba nemiphumela ukuze umzimba cishe njengoba eyinhlekelele.
Namuhla mayelana imisindvo ukubhema is ngisho ezisemagumbini ezikude kakhulu zaleli zwe ziyavezwa, njengoba bezentengiselwano abahwebi ukusakaza bazobona izimpahla zabo futhi lapho, usebenzisa indlela ukumaketha, owawuthi ukubhema spice - kuyinto mkhuba imfashini. Ngoba kumnandi abasha eziwubala "cool" ukuya " 'wabafundi' abalekelela" ukuze ujoyine lo mkhuba futhi ukwazi ahlangabezana nakho ngokuqomisana. Nalapha Spice bakhangwa kuqhathaniswa yayo ezingabizi: uyithenga, awukwazi eqolo, futhi kungaba njalo uzilungiselele ngokungabi bikho ngemali yakhe.
Zama lula, kodwa kunzima kakhulu ukuyeka, nakuba izinganekwane mayelana nokuphepha semthethweni imikhiqizo lizimelele ezingqondweni zabantu abavamile. Ngokuvamile ezicashe esakaza nenye amamiksi elimnandi anamagama senkondlo. It akunakuphikwa ukuthi bakhona banobungane ngempela bakhuluma bodwa, nakuba ayengafiki zikhanga kangaka. Umonakalo ingqikithi ukubhema Izingxube kungaba azimisele esebenzisa ukubola ku izingxenye. Akunakwenzeka iwukudambisa spice. Umonakalo kusuka aliveli ngokushesha, kodwa ngemva kwesikhathi ngemuva kokusebenzisa lokugcina nemiphumela buvivinywe ngokugcwele.
Ukukhanga spice abadonsile yalowo obhemayo kufinyelelwa ngenxa yezingxenye abalulekile, okungukuthi labo izingxenye okuyiwona, futhi indlela ayisebenzisayo. Ngaphandle esiphawulekayo ukubhema Izingxube zihlale khona izitshalo entheogenic anamagama romantic kakhulu ezifana kola nut, Lotus Exige okwesibhakabhaka, salvia kanye Hawaiian rose. Eziningi zalezi zitshalo kunqatshelwe ngokomthetho, kuyilapho abanye okusetshenziselwa izinjongo ezinhle, ezifana esikweyoku. Ukwakheka izidakamizwa kuhlanganisa kokubili amakhambi okwelapha, hhayi njalo.
Njengoba ukuhlupheka psyche
Evamile, spice ukufeza Analogue zokwenziwa insangu, kodwa umonakalo kusuka kuye okuningi kuka insangu, insangu noma insangu. Ngaphezu kwalokho, sezinzwa ukwehluleka uhlelo ekuthatheni spice kufika kuneNingizimu insangu. Lapho umuntu iqala ukuthatha yeziqholo, okushiwo okokuqala waqaphela njengoba isimiso sezinzwa esiyinhloko. Abantu ababhemayo ukuthuthukisa umuzwa ukukhathazeka, ukuhhema zenzeka, umuzwa ukwethuka, ukusabela ebuhlanzweni zingaqala. Kuyaphawuleka ukuthi abathandi intuthu spice ngokuvamile awela esibhedlela sengqondo njengoba kwezidakamizwa okwenza lezi zifo ngisho kuphakamisa kubo.
Umonakalo spice ine phezu lonke zomzimba womuntu ubuthi igazi ubuthi, bangcolise amaphaphu isibindi. Capillary ngenkathi ephawulekayo ayisesemikhulu, futhi isimiso sokujikeleza kwegazi akakwazi ukunikeza lemali edingekile umoya-mpilo ebuchosheni. Futhi wonke amangqamuzana efa ngaphandle kwalo. Abantu ababhemayo ubuchopho hypoxia kuzibonakalisa ngezindlela ezahlukene, kuya ngokuthi indlela spice.
Imiphumela yokusetshenziswa zingahluka kusuka ikhono enciphile kuhlelembisa ukuba nesiyezi ukukhanya. Kungase kube umuzwa indiza, ukudlala, okuyinto ngokungangabazeki edonsela ababhemayo. Isenzo spice kungaba emangalisa emva Puff lokuqala lobukhulu, walala; umuzwa nje ngisahlose lokho kuyinto intengo ezibizayo kakhulu ukukhokhela umonakalo empilweni, ngoba le ngxube nje ubulala amaseli, yakha izinzwa efile ebuchosheni.
Ukuze uthole ingane kubalulekile hhayi kuphela ukuze ihambisane kwezinkambiso mores umphakathi ekhethiwe, kodwa futhi ukuze uphile impilo ejwayelekile nge yonke iminonjana yokukhulekela romance. Ngokwesilinganiso, abantu abaneminyaka engu 17-18 abasha uqale ukuba ocansini, kodwa aluhambelani spice wathi. Umonakalo akhicitwe nakuchubeka ukubhema kuthinta sphere obuseduze, njengoba sehliselwe wagxila ngokobulili. In amadoda, ziyancipha potency, kuyilapho abesifazane babe okungajwayelekile imijikelezo kokuya esikhathini. Nge kwesikhathi kunciphisa umsebenzi kwesidoda, umsebenzi wabo ekhathazwa futhi survivability. Kuyefana nasendleleni amaqanda abesifazane. Kwezinye izimo ezinzima kungaholela nenzalo. Yileyo indlela buzz kudlula ngokushesha ezingenza abe nhlekelele lonke ekuphileni.
Ukuze izwi esindayo obhemayo phansi luqede cishe ngokuphelele. Yena akanandaba ukwakha umndeni, ukuqala ubuhlobo. Yini kungaba romantic, uma umuntu yena akulawuli futhi kalula ukuhlasela isihlobo?! Ngokuhamba kwesikhathi, umuntu obhemayo ngeke nakanjani uphendukela izidakamizwa namandla, iqala ukudubula futhi kancane kancane abe "zemifino". Kufanele ukuthi ngamandla spice kahlanu ephakeme kunaleyo amandla insangu, ukuze inqubo nokucekelwa kuyinto op. Kodwa ukuthi ibangelwa ukubhema insangu ziphathwa ngempumelelo, kodwa ungathi mayelana nokulungiselela enjalo kunonga?
Imiphumela ukusetshenziswa kanye nekhono uziqede
babuyele ngokugcwele emzimbeni kungenzeka, uma nje kukhona kwenqatshwa eliphelele yemifino kanye izingxenye zokwenziwa of spice. Ukushesha uyeke ugwayi, aba maningi amathuba okuba okuvimbela izinguquko sokugembula. Ngesikhathi esifanayo, abantu ababhemayo siqhubeke ukholelwa ngobuqotho ukuthi ngokomzimba ukuluthwa ukubhema ihlangana spice azibangelwa. Ngenxa yalesi eduke kumelwe nalo likhokhelwe lapho buzz indawo eze ukukhathazeka nokwesaba kanye ngamaphupho nje la. Ngokuzimela izimpawu musa ukususa iwadinga wakufanelekela usizo lwezokwelapha. Ubunzima main e ukusetshenziswa spice - kuba harmlessness okubonakala, ukubonakaliswa sekwedlule nemiphumela sokugembula.
Kuze kube isikhathi esithile, kukhona kwesizathu ukuyeka ukubhema, kodwa izimpawu atholakala, kuye ngokuthi inkathi lapho kuyinto sekwephuze kakhulu ukuba ngibuyele emuva ngingahambi. Uma abantu uqaphele inhliziyo umuntu omubi, asikwazi ukudonsa, futhi kufanele ubheke narcologist njengoba ezidinga ngokukhishwa kobuthi egazini esiphuthumayo futhi kungenzeka yokwelapha neyrometabolicheskie. ukumisa ngokushesha ukubhema kuhambisana ubuhlungu. Lokhu ikhefu, noma spice bashabalala.
Kuyinto namanje akukacaci ngokuphelele ingxenye spice. Empeleni, kuba yinoma yisiphi isitshalo omisiwe, ofakwe ezinye isixazululo zamakhemikhali noma analogue yayo. Ukuba yizinhlobonhlobo ukudala spice ivumela amafomula etshiyeneyo. Ngakho-ke, kuba nokwenzeka ukudayiswa spice ifomu cishe esisemthethweni lapho umkhiqizo ubizwa ngokuthi ukubhema noma ingxube ka amakhambi elimnandi.
Ekusebenteni, ukubunjwa spice kuyinto ezilapho. Kuhlanganisa pink-lotus okwesibhakabhaka, sage, wavuka nezinye utshani Hawaiian, futhi ezinye zazo zaziwa ngokuthi imithi esithambile. Spice kuyinto impahla eyayenziwe kwemiqondo, futhi inhlanganisela ngamunye ingaqukatha kufika ku 23 izingxenye kwengoma.
Ngemva spice akulula kangaka ukuba zibuye, ngakho isinqumo bebodwa ukuyeka ukubhema kuyoba okungalungile cishe ngaso sonke isikhathi. Ngenxa yalokho, ungase uhlangane ubunzima ifomu lokuhoxa syndrome, esizibonakalisa ngezindlela ezingafani. Ikakhulukazi, kungase kube ukuntuleka eside energy, ikhanda, isiyezi, bese ukwethuka, ubudlova, ukucindezeleka futhi uzonxanela Amazing ukuba ubheme. Ukuze sibhekane izimpawu kweqembu akunangqondo, futhi le ndoda ibuya ukuze kwalasha lapho bengeke benze yizidakamizwa. Ukuze unqobe ukwencika ukwelashwa can kuphela esibanzi - inkambo yokwelapha esibhedlela esikhethekile. Ngemva ukuqedwa ngokomzimba uhlala kwencika ngemilingo, ozokusiza ukuba babhekane zokusebenza kwengqondo kuphela.
Kungani kufanele ukuyeka ukubhema?
Endaweni yokuqala obhemayo Kudingeka siqaphele isimo esidabukisayo eyabo futhi ufuna ukubaleka. Izizathu zalokhu ziningi, ngisho noma ukuzibheka ekuphileni kwansuku zonke. Ungazama ukwenza noma yimuphi umsebenzi ngokomzimba, ezifana kobukhulu isihlamba noma wathatha uhambo olude ngezinyawo. Abantu ababhemayo uzoqala ngokushesha iphika, Futhi akuxhomekile ubudala. I degree of Ukuwohloka zomzimba womuntu zingase zehluke yobudala sangempela, njengoba ukuchayeka imikhuba emibi ethile izitho ahlupheke futhi yobudala ngokushesha. Okokuqala ukukhanya ogulayo okuyinto idlule ingxenyenamba main oxygen etholwe bese uvumele kukhishwe amandla ekudleni. Yokushodelwa umoya kubabangele yamandla aphansi, futhi abantu ngonyaka elalibhema yeziqholo, uzizwa buthakathaka.
Isizathu sesibili esiyinhloko - iyinkinga of kokudla esiswini, njengoba abaningi ababhemayo uhlushwa kolwelwesi noma isilonda esiswini. Lena akuyona nje ngengozi, njengoba izinto eziyingozi ezivela ugwayi ubuthi ngamathe futhi kuya esiswini. Ngoba sonke siyazi ukuthi ngesikhathi ukubhema abakwazi kudle ukudla. Abantu ababhemayo ngokuvamile aba isilungulela, ukuqunjelwa kanye esihlalweni ezimbi. Iqhaza layo kufanele omubi futhi okwenza ukudla okungalungile kanye notshwala.
I izizathu ezintathu eziyinhloko ukuyeka ukubhema, iza morzlost, okuyinto ikakhulukazi liphinyiselwe phakathi kwabesifazane. Abaningi abantu ababhemayo ababhemayo Spice ngisho ukushisa nakho Ukugodola, zibe dystonia semithambo. Lokhu kungenxa vasoconstriction futhi ekunqandeni kwegazi. Ngenxa yale nkinga, amadoda amaningi yobudala emaphakathi uhlangabezana nezinkinga nge potency.
Iqembu lesibili izizathu
ukungakhululeki Sinzima kuletha esindayo ababhemayo imvamisa imikhuhlane. Thina abayimilutha amasosha omzimba kunalokho ebuthakathaka kanye imikhuhlane ngokuvamile kuholela ukucinana kwemigudu yokuphefumula. Ingabe lokhu kumelwe kusolwe ku imvelo nezinye izinto, kodwa isizathu esiyinhloko - spice. Ukusetshenziswa ukubhema Izingxube kubathinta kabi ikhwalithi isimo imithambo yegazi. By the way, ukuhlolwa igazi sizobonisa indlela kabi emaphashini. Izimpawu zokuqala iyashaqisa ngoba obhemayo bangaba amaphupho amabi noma ukuqwasha, ukukhwehlela ebusuku, kuphenduke imangele. Kuba yisikhathi futhi lapho ingozi aphakeme abantu abanomdlavuza. By the way, ungakwazi ukuthola umdlavuza ngendlela efanele usaqala, uma izinguquko isaziso izwi lakhe. Kodwa neze abalandeli spice bayokwazisa izindaba ukuthi Craze ngeke sivumele ukubhema imisindvo ukuphila ngokuvumelana ukubonakaliswa abatelekile yalesi sifo.
Yini esinayo?? intsha Ngakho abaningi kanye nabantu abadala, abantu aphethwe ukhethe uthando eziyingozi kuphela ekuphishekeleni umqondo kudlula ngokushesha ukudlala nokuzola?! Ingabe spice eqolo? wentengo kukalwa hhayi kuphela ngokuya ngendaba kodwa cabanga nangezilaleli e leyo echithwa izinzwa imizimba nokuphila zonakale watshala.
Iphakheji Inani ukubhema uqweqwe aweve encane - ruble 400-600, kodwa leli nani kwanele lonke inkampani, kanye amacebo ambalwa. Izindleko efana hhayi omkhulu njengoNkulunkulu e ukusetshenziswa izimpushana ezibizayo. Kodwa umphumela mancane. Man elilulaza kancane kancane uguqulwe ube "zemifino", e-"asabekayo." Ngakolunye uhlangothi esikalini - ukwelashwa eside, intengo zazo ulinganiswa idijithi emihlanu-izinombolo. Ingabe kuwufanele it? Mhlawumbe kungcono hhayi ukuqala ukubhema spice?!
Kanjani ukuqala ukubhema, futhi kungakhathaliseki ukuthi kubalulekile ukuthola lo mkhuba?
Kuyini yembobo hookah?
Uyabakhathalela irises, kungani musa bukhule irises
Anna Litvinova. Umsebenzi kanye nempilo yakho.
Aleksandr Chudakov: A Biography, izincwadi, umfundi Izibuyekezo
Ikhadi Sibekezele: ukuthi kuyini futhi kungani kudingeka?
Nomswakama izinkomba. nomswakama eliphelele